Nguva itsva Of pakufamba kuenda kwaaishanda-Electric Skateboards - Jomo Technology Co., Ltd
Nguva itsva Of pakufamba kuenda kwaaishanda-Electric Skateboards
Kazhinji, nokuda pakukura uye kurema Skateboards vakatakura navo inyaya. Kunyanya Our Germany anotsanangura mudonzvo vakanga vagara kuziva "Electro-mufambo", inova enyika inonetsa muGermany uye zvechokwadi zvose munyika dzose kuburikidza Europe. Tinopa chikuru-notch mutengi rubatsiro sezvo zvinobudirira akuchengete uye kushanda kana iwe uri muenzaniso idzva mutengi kana kwenguva imwe! Nguva dzose kupfeka nezvengowani, uyewo mamwe zvinogamuchirika kuchengeteka giya (eg Kuvimba menyu murau, unogona unofanira kupfeka ngowani apo akatasva. Kubatsirwa kuvaka imwe yemagetsi skateboard? KOOWHEEL Drive chinhu mountable yemagetsi nemotokari kuti anochinja chero nguva skateboard ive yemagetsi skateboard - mukati kwemaminitsi. Maererano chikuva, zvazvinoita achiti kuti vakakura kuwanda, dzakanga nekuti unogona kubvumidzwa cowl zvinoshamisa kure pasina azofanira recharge ose maminitsi 10. Haana basa kana muchitsvaka hachizi itsva zvemari zvamarudzi chokufambisa kana chete vanoda kunakidze, kuti Koowheel ngarawa achakupa chemhando yepamusoro kuti Skating.
Koowheel ngarawa raMwari kwazvo nemigumisiro vacho pano ndaisazvitarisira, kufungisisa kukosha, inova kuderera kupfuura dzimwe Skateboards zhinji yemagetsi. The Koowheel iri kuvhiyiwa utilizing munhu Handheld kure controller izvo anowedzera anozvirumbidza pamusoro injini utsanzi kuti brushless. Achitsiva, rinopa chizvarwa hurumende simba yokuziva kana kuti kubvumira unyanzvi ravo kunyanya munhu maguta. Koowheel mapurani chikuru unhu uye kunyanya kuita dzemagetsi Skateboards kuti guta chokufambisa uye mabasa mitambo vachivakuza. Koowheel chinopa imwe yemagetsi skateboardpamwe sanzwisisika zvemadhenari uye vimbiso yemakwikwi panguva inokwanisika mari. Ndiri vaneshungu pamusoro kukosha kuita zvine ngozi - munyika kazhinji anoda isu hatidaro. Izvi zvinoita kuti kuongorora bhatiri dhigirii, saka kuti iwe urege kuwana pachako ine asingabatsiri skateboard kumbofunga. An zvinokosha zvinoumba yemagetsi skateboard midziyo ndiyo mabhatiri kuti powering ari motored skateboard, kuti controller kuti kumhanyisa uye braking, chikuru vanomhanyisa bhodhi uye mundiro nokuda recharging ari bhatiri.
The zviviri zvinokosha injini mhando kufungisisa pano aigona kuva-vhiri nomusimboti Motors kana bhandi akasundudzira vaya. Electric wedu Skateboard Kits kuchatibatsira kuti izvi zviri nyore kunzwisisa. Kazhinji, pane dzemagetsi Skateboards uye-mumugwagwa yemagetsi Skateboards. Wakaita zvakanaka mumwe pakati yangu Hottest uye vakawanda vakatarisa mbiru, yakawanda vanhu vakandiudza vari inofambiswa kuti pane zvave zvimwe mapuranga chaizvoizvo zvakanaka inoshayikwa. Kunyange zvakadaro, pashure kukura peturu dzinofambiswa Skateboards, kwave kune zvakanaka zvinokonzera shoma izvo zvakakonzera motorized mapuranga izvi kuti kurambidzwa kufanana: ruzha zvinoberekwa injini uye peturu injini akanga asika kusvibiswa.
Kutsvaka Muchifukura chaizvo yakanakisisa yemagetsi skateboard mberi, achida kuziva? KOOWHEEL Skateboards sanganisa kudzama wokunzwa mitambo mabasa pamwe chaiwo vanakidzwe pakati Skateboarding kuti anotakura imwe yakanakisisa simba chebhodhingi ruzivo iripo! Right ikozvino I kutakura, rangu maonero, 10 mukuru Skateboards kushandiswa nezuva. Top-of-the-mutsetse aongorora vagadziri kuti 2018 ndiro Koowheel. Rinopa muupenyu nokukurumidza 30km / h, pamusoro kumhanya 45km / h, enda mhanyisa, uye iwe unogona kufukidza kumativi 20 kusvika 25 km chete bhatiri mutariri. The chipo bhatiri riri 20pcs18650 High zvazvingava lithium masero.
Post nguva: Feb-06-2018